Archive du 05-mars-2021
Miara-manonja Eny amin’ny Magro Tanjombato indray
Tsy afaka manatanteraka hetsika eny Soamandrakizay ny mpanohitra amin’ny sabotsy ho avy izao.
Rafitra LMD Mety amin’ny Malagasy ve ny fampiharana azy ?
11 taona lasa teo, izany hoe teo anelanelan’ny taona 2008 – 2009, izay no nanomanana
Toy ny vitan-tsetsetra
Mahantra indrindra maneran-tany ny Malagasy. Mitotongana ny fanajana ny kolontsaina sy soatoavina.
Andro ratsy Tombanana hiditra an-tanety ao Melaky anio
Misy andro ratsy miforona ao amin’ny lakandranon’i Mozambika. Any amin’ny 300 Km Andrefan’i Besalampy
Ady amin’ny lozam-pifamoivoizana Hofanina ireo orinasa manana fiara maro
Miezaka hatrany ny eo anivon’ny foibe fitsarana fiarakodia miady amin’ireo karazana
Roland Ratsiraka Manakiana mafy an-dRavatomanga
Mitohy ny karazana ampamoakan’ny Depiote Roland Ratsikaraka maneho ny
Asa fanendahana Jiolahy iray indray no tratra teny Antaniavo
Jiolahy iray no saron’ny polisy avy ao amin'ny PPA4 Antaniavo ny 02 martsa 2021 lasa teo tokony ho tamin'ny 11ora atoandro.
Filohan’ny HCC Iza no handimby an’i Jean Eric Rakotoarisoa ? Filohan’ny HCC Iza no handimby an’i Jean Eric Rakotoarisoa ?
Ho tapitra ny 14 martsa ho avy izao ny fe-potoana 7 taona tsy azo havaozina maha Filohan’ny
Hery Bastien Tsy voaantso Barea intsony
Somary nampametra-panontaniana maro ireo mpanaraka ny kitra Malagasy ihany ny tsy
Tanora RMDM Miantso ny tanora hanohitra ny jadona
Nanao fanambarana tetsy Bel’air omaly ireo tanora mpanohitra eo anivon’ny
Fahamaizan’ny ONE Mba nanao ahoana moa ny tohiny raharaha ?
Efa ny 15 jolay 2020 no may ny Ofisim-pirenena momba ny tontolo iainana (ONE) tetsy Antaninarenina,
Fitsarana an’i Rolly Mercia Tsy voahaja ny zon’olombelona
Hiakatra fitsarana indray ny Minisitry ny serasera teo aloha Atoa Harry Laurent Rahajason na Rolly Mercia anio 5 martsa.
Fifanintsanan’ny CAN 2022 Fantatra ireo mpilalao handrafitra ny Barea
Nampahafantarina omaly ny lisitr’ireo mpilalao 29 handrafitra ny Barean’i Madagasikara
Mponin’Ambohipo Nanome soso-kevitra iadiana amin’ny fitohanana eny Ambanidia
Eo Ambanidia irery ihany no hany lalan-tokana hivoahan’ireo mponina avy any Ambohipo rehefa hivoaka izy ireny.
Hetsi-panoherana sy fitakiana samihafa Lasa manampidi-kizo ny fitondram-panjakana
Manahirana ny Fitondrana ny hetsi-panoherana sy ny fitakiana samihafa mandeha amin’izao fotoana izao.
Fanafihana tany Maroantsetra Voatifitra teo amin’ny feny ny jiolahy iray
Nisy fanafihana niseho tany Maroantsetra ny 03 martsa lasa teo. Raha tsiahivina kely ny tantara
World Music Hiavaka ny fiarahana amin’i Davis
Revy hafa mihitsy no iarahana amin’ny mpanakanto mpiangaly ny World music, Davis,
Arlette Ramaroson “Tsy tokony averina eto ireo olona miisa 3 any Afrika atsimo”
Tsy nahazo rariny, hoy ny mpitsara iraisampirenena teo aloha, Arlette Ramaroson, ny firenena Dubaioty,
Famonjena voina Notoloran’ny Tafika Frantsay fitaovana ny BNGRC, CPC …
Notanterahina omaly alakamisy 04 martsa 2021 teny amin’ny Section Nautique Ivato ny fanoloran’ny Tafika Frantsay
Tafika sy fiarovam-pirenena Nomena toromarika ireo Kaomandin’ny Faritra
Nihaona tamin’ireo Kaomandin’ny Faritry ny Fiarovana sy ny Fandriampahalemana na ny
Vaky trano tany Sambava Tratra ireo jiolahy efa-dahy tena nikoizana
Mirongatra ny vaky trano ao an-tampon-tananan’i Sambava, lehilahy miisa 04 no voasambotry ny Polisy tany an-toerana vokatr’izany.
Hetsika Nosy Malagasy “Miteniteny foana ny loholona”
Tsy nangina ny hetsika Nosy Malagasy, hoy ny isan’ireo mpitarika izany, Arlette Ramaroson, omaly.
Mpanakanto Wawa Mamatsy vola 250 tapitrisa Ariary hanamboarana lalana
Lalana manodidina ny 1km, miainga avy amin'ny sampanan-dalana amin'ny CNaPS
Toliara Horakofana jiro ny tanàna, omena fiofanana ny tanora
Hasiana jiro manazava ny tanàna avokoa ao an-drenivohitry ny Faritra Atsimo Andrefana.
CENAM 67 Ha Am-perinasa ny atelier HAR’KANTO
Notokanana tamim-pomba ôfisialy omaly tetsy amin’ny CENAM 67Ha ny Atelier HAR’KANTO,
Jeune TIM Analamanga “Ilain’ny firenena io tatitra amin’ny sabotsy io”
Ao anatin’ny tolona iaraha-manana ankehitriny ny Jeune TIM Analamanga, hoy ny filohan’ity tanoran’ny